Oziọma taa 16 Septemba 2020 na okwu Pope Francis | Blọọgụ nke ekpere
Oziọma taa 16 Septemba 2020 na okwu Pope Francis
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 16, 2020 Septemba 17, 2020
Mụnna nwoke, kama, na-atụsi anya nnupụisi kasịnụ. Yabụ, egosiri m gị ụzọ kachasị mma.
Ọ buru na asim asusu di iche nke madu na nke ndi-mọ-ozi, ma enweghm ihu-n'anya, m'gādi ka ọla ọla nāda udà ma-ọbu ájà nke nāda udà.
Ma oburu na m nwere onyinye nke ibu amuma, oburu na m mara ihe omimi nile ma nwee ihe omuma nile, oburu na m nwere okwukwe zuru oke iji buru ugwu, ma enweghm obi ebere, agaghm adi ihe efu.
Ọbụna ma ọ bụrụ na m nyefee ngwongwo m niile ka ọ bụrụ ihe oriri ma nyefee ahụ m iji nya isi maka ya, mana enweghị m afọ ọma, ọ gaghị abara m uru.
Charity bụ magnanimous, ọrụ ebere bụ obiọma; ọ dịghị enwe anyaụfụ, ọ dịghị etu ọnụ, ọ dịghị aza mpako, ọ dịghị enwe nkwanye ùgwù, ọ dịghị achọ ọdịmma nke ya, ọ dịghị ewe iwe, ọ naghị eburu ihe ọjọọ e nwetara n'uche, ọ dịghị enwe obi ụtọ n'ụzọ na-ezighị ezi kama ọ na-a rejoụrị ọ inụ n'eziokwu ahụ. Ndo niile, kwere niile, olile anya niile, ha niile diri.
Ọrụ ebere agaghị akwụsị akwụsị. Amụma ga-apụ n'anya, onyinye nke asụsụ ga-akwụsị ma ihe ọmụma ga-apụ n'anya. N'ezie, ezughị okè anyị maara ma na-ebu amụma na ezughị oke. Mana mgbe nke zuru oke bịara, nke ahụ ezughị oke ga-apụ n'anya. Mgbe m bụ nwata, ekwurum okwu dika nwatakiri, echere m echiche dika nwatakiri, echere m echiche dika nwatakiri. Enweela m nwoke, ewepụla m ihe dị ka nwatakịrị.
Ugbu a, anyị na-ahụ n'ụzọ mgbagwoju anya, dị ka enyo; mgbe ahụ anyị ga-ahụ ihu na ihu. Ugbu a amata m na ezughị oke, mana mgbe ahụ ka m ga-amata n'ụzọ zuru oke, dịka esi mara m. Yabụ ugbu a ihe atọ ndị a ka fọdụrụ: okwukwe, olile-anya na afọ-ọma. Ma nke kachasị n’ihe nile bụ ọrụ ebere!
Lk 7,31: 35-XNUMX
N'oge ahụ, Onye-nwe kwuru, sị:
“Whonye ka m ga-eji tụnyere ndị ọgbọ a? Isnye ka ya na ya yiri? Ọ dị ka ụmụaka ndị na-anọdụ ala na mbara igwe, na-etiku ibe ha mkpu dị ka nke a:
"Anyị fụrụ opi ma ị gbaa egwu,
anyi gere akwa ariri ma gi ebeghi akwa! ”.
N’ezie, Jọn Baptist bịara, onye anaghị eri achịcha ma ọ naghị a drinkụ mmanya, ma ị sịrị: “Mmụọ ọjọọ ji ya”. Nwa nke Mmadu biara, onye rie ma drinksu ihe onunu, unu wee si: "Nke a bu onye na-eribiga nri na onye a drunkụrụma, enyi nke ndị ọnaụtụ na ndị mmehie!"
Ma amatawo na amamihe dịka ụmụ ya niile.
Nke a bụ ihe na-ewute obi nke Jizọs Kraịst, akụkọ a nke ekwesịghị ntụkwasị obi, akụkọ a nke ịghara ịmata mmetụta nke Chineke, ịhụnanya nke Chineke, nke Chineke n'ịhụnanya onye na-achọ gị, na-achọ ka gị onwe gị nwee obi ụtọ. Ihe nkiri a emeghị naanị n'akụkọ ihe mere eme wee kwụsị Jizọs.Ọ bụ ihe nkiri kwa ụbọchị. O bukwanu ihe ejije m. Onye ọ bụla n’ime anyị nwere ike ịjụ, sị: ‘M̀ nwere ike ịmata mgbe a bịara leta m? Chineke ọ̀ na-eleta m? ' Onye ọ bụla n’ime anyị nwere ike ịdaba n’otu mmehie ahụ ndị Izrel mere, otu mmehie ahụ o mere na Jerusalem: n’amaghị oge eleta anyị. Kwa ụbọchị, Onye-nwe-anyị na-eleta anyị, kwa ụbọchị ọ na-akụrụ anyị aka. Anụla m ọkpụkpọ oku ọ bụla, mmụọ nsọ ọ bụla ịgbasochi ya anya, ịrụ ọrụ ebere, ikpe obere obere? Amaghị m, ọtụtụ ihe nke Onyenwe anyị na-akpọ anyị oku kwa ụbọchị ka anyị zute anyị. (Santa Marta, Nọvemba 17, 2016)
← Na post gara aga Gara aga post:San Cornelio, Saint nke ụbọchị 16 Septemba
Ọzọ Post → Post ozo:Pope na nwoke na nwanyi na ihe oriri, ihe nketa nke ndi kadinal na nkpuru ulo uka